Echiche gị dị mkpa: Echiche gbasara Debian | Site na Linux
Echiche gị dị mkpa: Echiche gbasara Debian
Anyị laghachiri na ibu na ngalaba: Echiche gị bara uru, oge a na email nke onye ọrụ aha ya Perseus.
1 Perseus na-agwa anyị:
2 Site Linux zara:
Perseus na-agwa anyị:
Ekele m ndị otu niile Ndokwa, M na-ekele gị maka blog (ọ bụ otu n'ime ndị ọkacha mmasị m ;-)) n'oge a, m ga-achọ ịma echiche gị banyere ya.
Eji m ya archlinux, PCLinuxOs y LMDE (distros nke m maara na-agbanwe ma ọ bụ yie echiche ahụ), ajụjụ m bụ, olee nke n'ime distros 3 ndị a nke yiri debian? Enwetụbeghị m ya n'ihi ịbụ 'Oge ochie ma ọ bụ ablekwụ' (Ezuru m okwu a n'aka burjans: P).
Enwere m mmasị ịpịgharị dị ka arch, ebe ọ bụ na m hụrụ n'anya na m nwere ike ịnwe ngwugwu ọgbara ọhụrụ ma agaghị echere ogologo oge ka etinye ha na listi ngwanrọ ha ma ọ bụ ka ha pụta na mwepụta ọzọ (dị ka PCLinuxOS ).
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịgbasawanye isiokwu a (otu esi etinye ya, kedu na ụdị ụdị nsụgharị dị iche iche yana ọdịiche ha, gburugburu desktọọpụ, data teknụzụ, wdg), nke a hụrụ nke ọma site na ahụmịhe ha, ọ ga-adị mma. Knowsnye maara, ma eleghị anya, m ga-achọ ịnwale ya otu ugboro ;-).
Site Linux zara:
Nke mbu, ekelee m gi nke oma maka okwu ikwuru m. Site na Linux.
Ọ dị ịtụnanya, enwere ihe ị ga-eleghara anya: Ọ bụrụ na ị jirila Debian : D. Ọ bụrụ na ị na-agwa anyị na ị na-eji LMDE (Mint Debian Mint Linux) Ugbua, inweela ugbua. Anyị na-echetara gị nke ahụ LMDE bụ mbipute nke Mint Linux nke dabere na Debian piakota / ule.
Banyere ahịrịokwu Burjans enwere m ike ịgwa gị na enwere akụkụ na akụkụ. Ihe niile dabere na ụbọchị ị chọrọ ịbụ. Debian nwere alaka mụ (nke bụ ihe m chere na ndị burjans na-ezo aka), ngalaba Testing na alaka ụlọ ọrụ Sid. I nwere ike ịgụtakwu banyere nke a Ebe a.
N'okwu m ka m ji Testing, na m nwere ọhụrụ (anụ) nsụgharị nke ọtụtụ nchịkọta, atụ:
Ugbu a, ọ bụ eziokwu na mbipute nke Debian nwa Rolling Hapụ olee otú ha ga-esi bụrụ archlinux o PCLinuxOS.
N’ezie anyi nwere ike ilebanye okwu a anya nke oma, ma oburu n’acho, ị nwere ike ibudata a PDF banyere ya nwụnye nke i nwere ike ịhụ na nke a. N'ime ntuziaka a ị ga - ahụ otu esi etinye ya Debian piakota (alaka ụlọ ọrụ ugbu a) na otu esi ahazi ụfọdụ nkọwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Echiche gị dị mkpa: Echiche gbasara Debian
Ahụrụ m na Perseus ezughị ezu ahịrịokwu ahụ site na isiokwu ahụ:
ebe m na-ekwu ma kwue:
O doro anya na ụmụ nwoke Debian chọrọ ịhapụ obere akara 'Oge ochie ma ọ bụ na ebe obibi', iji mee ka ọ bụrụ 'Oge na Stable'.
Amaghi m ihe I na-ekwu ma na uzo RAE i na eme ma i nweghi .. Ma obu amaghi ka esi eji akowa okwu? 😕
"Nwere" nwere "inwe"; na "ime" bụ "ime."
Na isiokwu a, ọ na-esiri ezigbo ike ime mkpesa banyere Debian ozugbo ị doro anya banyere ọdịiche dị n'etiti "nkwụsi ike", "ule" na "sid". Na ọ na-eme anyị ndị na-abụghị ndị sayensị kọmputa na-ata ahụhụ, enweghị obi abụọ, mana ndị ndụmọdụ na-arụ nnukwu ọrụ na LMDE, na-eme ka ihe dịrị anyị mfe.
Mgbe obi ike gbalịrị idozi m, enwere m obi abụọ (enwere m ike ihie ụzọ, abụ m mmadụ). Adịghị m ọkachamara n'asụsụ Spanish n'ihi ya amalitere m ile anya, ọ bụ ezie na anaghị m achọta ihe ọ bụla na ibe m nwere ike ịnweta. Aguru m na elu na "beam" nke "do" ka eji na mmuo di nkpa, imaatu: Mee nke a, ana m ezitere gi ya! Mgbe ahụ Iri na atọ, n'ihe banyere isiokwu Olee otú ọ dị? You na-eji "nwere" ka ọ bụ "mee"?
Amaara m, onye nkuzi Spanish kọwaara m. Obi ike ziri ezi ¬¬
Na ederede ọ kwesịrị ịsị, "ị meela ya" dịka ọ na-ezo aka na "ịme" ihe. Dịka ndụmọdụ, "beam" nwere ike dochie anya "ịrụ" kama "nwere", enweghị ike dochie ya.
Dịka ọmụmaatụ, na nkwupụta gị ị nweghị ike iji dochie anya maka "igosi" dịka ọ ga-agụ dị ka: "emeworị 'eme", nke a enweghị isi.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị kwuo: "Mee ihe omume ụlọ akwụkwọ gị," mgbe ahụ ọ bụrụ na ị nwere ike dochie anya "rụọ ọrụ ụlọ gị."
Daalụ maka klaasị, otu ihe onye nkuzi Spanish kọwaara m hahaha ..
[Memo m: You ga-amụkwu ihe .. ọtụtụ ihe ọzọ ...]
Naanị ihe m nwere ike ikwu gbasara Debian bụ na ọ bụ shitty 3-pair distro nakwa na m na-ahọrọ otu puku ugboro iji Hasefroch hacked na mmanya nke shitty Debian nke bọọlụ, Amaghị m etu esi emeghe oghere ahụ Hasefroch ka dị ndụ
Bịa nke ọma
Enweghị m mmasị na ya n'ihi enweghị ndidi nke nchịkọta na obere obere ihe na ndekọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka nke ahụ m gaara anọnyere ya nwa oge.
N'ime oge ndị ọzọ n'oge ahụ, egosighi m nsogbu kwụsiri ike ma ọsọ ahụ dị ezigbo mma
Maka ihe nkesa o yiri ka ọ bụ ezigbo echiche, dịka BSD ma ọ bụ Slackware.
Maka anyi ighota onwe anyi, Debian di ka blonde na Arch dikwa ka ocha, okachasi m nma
Ọ bụrụ na Debian dị ka Blonde, agaghị m eji ya n'ihi na m na-ahọrọ brunettes. Ọ bụrụ na ị nwere ike biko kọwaa nke a:
Ah, ọ bụ na ọ bụ 100% n'efu, ị chọghị ihe ọ bụla na ntinye aha ntakịrị
Ọfọn, Debian nwere nkwanye ùgwù m niile, ma ọ bụrụ na ha gbalịa bụrụ ndị kwụ chịm (dịka ngalaba ụlọ ahụ na-adị mgbe niile), ma emelitere. Mgbe m na-eji ya, enwere m naanị otu nsogbu ma ọ bụ na ngalaba na-adịghị agbanwe agbanwe, ọ bụ ya mere m ji ekwukarị na nkwenye siri ike debian ejighị n'aka. Ma hey, onye ọ bụla nke nwere ihe na-anwale ma ọ bụ na-adịghị agbanwe agbanwe, kwesịrị ịma ihe ị ga-atụ anya ya ma ọ bụ na ọ ga-atụ anya ọdịda na oge ụfọdụ.
Site na ndị ọzọ siri ike dị ka nnukwu osisi na mgbe Arch, Debian. (M na-amasị m, ma na quilombo dị ka ndị Argentines na-ekwu)
Qt Project: n'ikpeazụ Qt bụ n'efu na obodo